ITEC Graphic Design Group
အနန္တောအနန္တငါးပါးနှင့်တကွ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများအားလုံးကိုဦးထိပ်ထားလျှက် ယခုဘလော့ပိုစ်အားပြင်ဆင်ပါသည်။
ယနေ. ကမ္ဘာ ကြီး ကိုတော့ အများ တကာတွေ ပြောနေကြတဲ့ ကမ္ဘာရွာတဲ့….။
ကြီးရဲ့ အကြောင်းကို သေသေချာချာ မသိပေမဲ့ ကမ္ဘာရွာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို
ကြားတော့ ကိုယ့်အတွက် အစိမ်း သက်သက် ဖြစ်မနေပဲ နားဝင်ချို သလို
ခံစားမိလေရဲ့။ ဘာလို.လဲဆို တော့ ကျွန်မတို.က ရွာမှာနေ ၊ ရွာမှာ
ကြီးပျင်းရတဲ့ သူကိုး ။ ကမ္ဘာကြီးဟာ တို.ရွာလိုပဲ ရွာကြီး တရွာ ဖြစ်လို.
သွားပြီ လို.ပြောသံ ကြားရပြန်တော့လည်း ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ သဘောကျမိ ပြန်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ရွာ
ကြီးကို Global Village လို. ကင်ပွန်းတပ် လိုက် တဲ့ အချိန်ကစပြီး
Globalization တို. Global Economic, Global Banking, Global Market,
Global Finance, စတဲ့ ဝေါဟာရတွေဟာ ကမ္ဘာ့ရွာကြီး ထဲမှာ ရေပန်းစား
လာလိုက်တာများ၊ သိတာ မသိတာ အပထား။ ဒီစကား လုံးတွေ ကို သူများ ရွတ်လို့မှ
ကိုယ်လိုက် မရွတ် တတ်ရင် ခေတ်နောက်ကျပြီး မျက်နှာငယ်ရတဲ့ အဖြစ်။ ဒီရွာကြီး
ထဲမှာ ဈေးဝယ် ရင်တောင် ထိုင်ရာ မထ မိမိအိမ်က ကွန်ပြူတာ ရှေ.ကနေ ခလုပ်လေး
နှိပ်ပြီး အီလက် ထရောနစ် စနစ် နဲ့ အွန်လိူင်း ကနေ ဈေးရောင်း၊ ဈေးဝယ်
လုပ်ကြ ပြန်လေတော့ E- Banking , E- Commerce ၊ E- Trade စတဲ့ အီး ဆိုတဲ့
အသံတွေ ရွာကြီး တရွာလုံး ဆူညံလို.သွား ပြန်ပါရော။ ဒီ E- အီးတွေ တွင်တွင်
ကျယ်ကျယ် သုံးလာကြ ပြန်တော့ အိုင်တွေ မရှိမဖြစ် လိုအပ် လာပြန်ပြီတဲ့ ။ IT
တွေ Internet တွေ ၊ Iphone စတဲ့ အိုင်တွေကြားမှာ ရွာသူ ၊ ရွာသားတွေ
အားလုံးလိုလို လည်း (Net) ဆိုတဲ့ ပိုက်ကွန်ထဲမှာ ငြိမိပြီး ပိတ်မိနေကြတာ
World Wide Web ဖြစ်သွားကတည်း ကလို. ဆိုမလား။ ဒီ ဂလိုိဘယ်(လ်) ထဲမှာ
တို.ရွာ ပါမပါတော့ မပြောတတ် ပေမဲ့ ၊ Global Warming ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှု.
ထဲမှာတော့ တို.ရွာ ပါနေ တာတော့ သိပ်သဘော မတွေ. လှဘူးပေါ့။ဒီ
အသံတွေ ကြားထဲမှာ နောက်ဆက်တွဲ အကျယ်လောင် ဆုံး မြည်ဟည်း နေတဲ့ အသံကတော့
ယနေ.ခေတ်ကို “ ပညာခေတ် (knowledge Age) လို. ခေါ်ဆိုလိုက်ပြန်တော့
ဆော်ဖီတွေ လော်ဂျီ တွေရဲ့ ကြားမှာ တို. ရွာက လူတွေလည်း ဘွဲ.တွေ ၊ ဒီဂရီတွေ
များ သထက်များ၊ အောင်လက်မှတ်တွေ မျိုးစုံ ရအောင် သင်ကြားရင်းနဲ့
ပညာခေတ်ကို အမှီလိုက် ကြပါတော့တယ်။ ဘွဲ.ရမှ ပညာတတ် တယ်လို. အများက
သုံးနူန်းပြောဆို ကြပေမဲ့ တကယ်တော့ ပညာဆိုတာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အတွေးခေါ်၊
ဗဟုသုတ အပြင် အကြောင်းရင်းကို အသေးစိတ် နားလည် သိရှိ ခြင်း ကို ပညာလို့
ဆိုပါတယ်။ ဘွဲ့ရ ခါစ လူတယောက်ဟာ လမ်းဆုံလမ်းခွ မှာရောက်ပြီး
ရပ်နေတဲ့ လူတယောက်လို ပါပဲ။ ဘ၀ခရီး လျေက်လှမ်းဖို.ရာ အတွက် အရှေ.လမ်း
သွားရမှာလား၊ အနောက်လမ်း သွားရမလား၊ တောင်လမ်း သွားရမလား၊ မြောက်လမ်း
သွားရမလား။ ဘယ်လမ်း သွားရမှန်းကို မသိပါဘူး ၊ မျော်ကြည့် လိုက်
ပြန်ရင်လည်း လမ်းကြီးတွေ ကလည်း အရှည်ကြီးတွေ ဆိုတော့ ဘယ်လမ်းကို
ရွေးချယ်ပြီး သွားရမယ်မှန်း မသိအောင်ပါပဲ။ ဘယ်လို သွားရမှန်ူး
မသိဘူးဆိုပြီး လမ်းဆုံလမ်းခွမှာပဲ ထိုင်ပြီးတော့ မိုင်တွေ၊ ငေးမော၊
လက်မိုင်ချ၊ အရူံးပေး နေတော့မလား၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာတွေ ရှိပါရက်နဲ့ ဒီပညာ
တွေကို လက်တွေ. ဘ၀မှာ အသုံး မချပဲ ၊ ကျင့်သုံးမူ. မပြုပဲ ဘ၀
ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ကူးဖြတ်နိုင်ပါ မည်လား။ ဒီ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ဖတ်ဖူးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်လေး တပုဒ် ကို စာဖတ် သူတို.ကို
မျှဝေချင်ပါတယ်။ လော်ဂျီတွေ၊ ဆော်ဖီတွေ အများကြီး တတ်ပြီး
အောင်လက်မှတ်တွေ၊ ဘွဲ.တွေ၊ ဒီဂရီတွေ၊ အများကြီး ရထားတဲ့ ၊ ပရော်ဖက်ဆာကြီး
တစ်ယောက် အကြောင်းပေါ့။ အဲဒီ ပရောဖက်ဆာ ကြီးဟာ သူ.ရဲ့ နာမည်ရဲ့ နောက်မှာ
ဘွဲ.တွေ အရှည် ကြီး ချိတ်နိုင်လောက် အောင် ပညာတွေ သင်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးပါ။ သူဟာ ပင်လယ်ပြင်မှာ လေ့လာရေး ခရီးထွက် ဖို.ရာအတွက်
မှန်ပြောင်းတွေ လေတိုင်း ကရိယာတွေ ၊ မြေပုံတွေ ၊ စတဲ့ ကိရိယာ တွေကို တပွေ.
တပိုက် ကြီးထမ်းပြီး ပင်လယ် ကမ်းခြေ ကို ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ကမ်းခြေ
ရောက်တော့ သင်္ဘောငယ် လေး တစ်စီး ငှားပြီး သင်္ဘောမောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန် နဲ့ အတူ၊
နှစ်ယောက်သား ပင်လယ်ဘက်ကို ခရီး ထွက် ခဲ့ကြပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ် ရောက်တော့ သင်္ဘောမောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန်ကို ပရောဖက် ဆာကြီး က စတင်ပြီး ဟေ့ ကပ္ပတိန် မင်း ဒီ ပင်လယ် ကြီးထဲမှာ သင်္ဘော မောင်းနေတာဆိုတော့၊“Have you studied oceanography? ”“မင်း ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာတွေ့အကြောင်းကို လေ.လာဘူးသလား ၊ ”အဲဒီ
အခါမှာ သင်္ဘောမောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန်က ပရောဖက်ဆာ ကြီးပြောတဲ့ oceanography ဆိုတာ
ကျုပ်သိလည်း မသိဘူး၊ သင်လည်း မသင်ခဲ့ဖူးးပါဘူး။ သို.ပေမဲ့ “ကျုပ် ဒီပင်လယ်
ကြီးမှာမွေးပြီး ၊ ဒီပင်လယ်ကြီးမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကောင်ပါဗျာ ၊
ဒီပင်လယ်ပြင် ကြီးထဲမှာ ကျုပ်သင်္ဘော မောင်းလာတာ နှစ်တွေ
အများကြီးရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျုပ် ပင်လယ်ပြင်မှာ သဘောင်္မောင်းတဲ့
အတွေ.အကြုံ ကောင်းကောင်း တော့ ရှိပါတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာ ကြီး သွားချင်တဲ့
နေရာကို ကျုပ် မောင်းပို.ပေး နိုင် ပါတယ်လို. ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့
ပရော်ဖက် ဆာကြီးက မင်း oceanography မသိပဲနဲ့ မင်း ပင်လယ်ထဲ သင်္ဘောမောင်း
နေတာဟာ မင်းအသက်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ သေပြီလို.သာ မှတ်လိုက်တော့ လို.ဆိုပါတယ်။သင်္ဘော
ကပ္ပတိန်ကတော့ သူ.ယုံကြည်ချက်နဲ့ သူ သင်္ဘောကို ဆက်လက် မောင်းနှင်လို.
သွားပါတယ်။ သင်္ဘောလေးဟာ တဖြည်းဖြည်း ရေနက်ပိုင်းကို ရောက်လို.လာပါတယ်။
ကောင်းကင်ကြီး ကလည်း တဖြည်းဖြည်း မည်းလာပါတယ်။ မိုးကလည်း တဖြည်းဖြည်း
ရွာလာပါတယ်။ လေကလည်း တဖြူးဖြူး တိုက်လို. လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပရောဖက်ဆာ ကြီးက
မှန်ပြောင်း ထုတ်ပြီး ကောင်းကင်ကြီး ကို ကြည့်လိုက်၊ ရေးမှတ်လိုက်၊
ရေပြင်ရဲ့ ရေအရောင် ကို ကြည့်ပြီး ရေးလိုက်၊ မှတ်လိုက် ၊သူယူလာတဲ့ ပစ္စည်း
ကရိယာတွေကို ထုတ်ပြီး မိုးလေ၀သကို သိရှိဖို. စလောင်းတွေ တပ်လိုက်၊ ဟိုဘက်
လှည့်လိုက် ဒီဘက်လှည့်လိုက် နဲ့ လုပ်နေရာကနေ သင်္ဘော ကပ္ပတိန်ဘက် လှည့်ပြီး၊ဟေ့ ကပ္ပတိန်“Have you studied meteorology?”“မင်း၊ မိုးလေ၀သ အခြေအနေ ခန်.မှန်းမူ. အတတ် ကိုရော မင်း လေ.လာဘူးသလား ။ ”
ဒါနဲ့ သင်္ဘောမောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန်က “မလေ.လာခဲ့ဖူးပါဘူး” ဒါပေမဲ့ ကောင်းကင်က
တိမ် အရောင်ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်တိမ် ရောင် တောက်ရင် မိုးရွာမယ်။
ဘယ်တိမ်ရောင် လာရင် မုန်တိုင်းတိုက် မယ်ဆိုတာ ကျုပ် ပင်လယ်ပြင်မှာ
သင်္ဘောမောင်း လာတဲ့ အတွေ.အကြုံ အရတာ့ ကျုပ်သိပါတယ်ခင်ဗျာ လို.
ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် ။ ထိုအခါ ပရော်ဖက်ဆာ ကြီးက မင်းက ရာသီဥတုတွေ
မိုးလေ၀သ အကြောင်း တွေ မသိပဲနဲ့ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
အလုပ်လုပ် နေတာဟာ မင်းအသက်ရဲ့ လေးပုံ နှစ်ပုံ သေပြီလို.သာ မှတ်လိုက်တော့။
လို.ဆိုသတဲ့ကပ္ပတိန်လည်း ပရော်ဖက်ဆာ ကြီး ပြောသလို သေတော့မှ သေပေါ့လေ ။
ဆက်ပြိး မောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး မလျော့တဲ့ ဇွဲနဲ့ မိမိကိုယ် မိမိ
ယုံကြည်ချက်နဲ့ သင်္ဘောကို ဆက်မောင်း သွားပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့
ညအမှေင်က ကြီးစိုးလို. လာပါတယ်။ သင်္ဘော လေး ကလည်း ပင်လယ်ပင်ကြီးထဲမှာ
တော်တော်လေး ခရီးရောက်လို. လာပါတယ်။ မှောင်လာတော့ သင်္ဘောသွားတဲ့
(Direction) လမ်းကြောင်း က အရေးကြီး လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပရောဖက်ဆာ ကြီးက ဟေ့
ကပ္ပတိန် အခု “တို. အခု ရေနက်ထဲ ရောက်နေပြီ၊ ကောင်းကင် ကလည်း မှောင်လာပြီ၊
မဲလာပြီ ၊ မင်း ကောင်းကင် ကြယ်တွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိရဲ့လား၊ ”
“Have you studied Astrology?” ဆိုပြီး နောက်တစ်ခု ထပ်မေးပြန်ပါတယ်။ “မင်း နက္ခတ်ပညာ အတတ်ကို မင်းသိသလား ပေါ့လေ ”ဒါနဲ့
သဘောင်္မောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန်ကြီးကလည်း ၊ “ကျုပ် ဘယ်တက္ကသိုလ်မှ၊ မတက်ဖုးတဲ့
အတွက် နက္ခတ်ပညာ ဆိုတာကိုလည်း နားမလည် ပါဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ ကျုပ် ဒီပင်လယ်
ကြီးမှာ မွေးလာတာမို. ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကို ကြည့်ပြီး တော့ ဘယ်ကြယ်တောက်
နေရင် ဘယ်အရပ် ၊ ဆိုတာကိုတော့ ကျုပ်အတွေ. အကြုံအရ သိပါတယ်။” လို.
ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ပရော်ဖက်ဆာကြီးကတော့ မင်း နက္ခတ်ပညာ မတတ်ပဲ ပင်လယ်ထဲ သင်္ဘော မောင်းနေတာဟာ မင်းအသက်ရဲ့ လေးပုံသုံးပုံ သေပြီလို.သာ မှတ်လိုက်တော့။ သင်္ဘော
မောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန် ကလည်း ပရောဖက်ဆာကြီး ပြောသမျှပဲပေါ့လေ၊ မေးသမျှလည်း
ဘာမှ မတတ်ပဲကိုး။ တတ်ထားတဲ့ အတတ်ပညာလေး နဲ့တော့ ဆက်မောင်းမှာပဲ ပေါ့လေ။ ဒီလို
နဲ့ ခရီးဆက်လာ လိုက်တာ၊ ညအမှောင် ကလည်း ထူထပ်လို. လာပါတယ်။
လေမုန်တိုင်းကလည်း ထန်လာပါတယ်။ မိုးကလည်း သည်း ထန်စွာ ရွာသွန်း
လို.လါပါတယ်။ လိူင်းအပြင်း အထန် ထလာပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သဘောင်္ကြီးဟာ
ကျောက်ဆောင် ကြီးကို လည်း ၀င်တိုက် လိုက်ပါ တော့တယ်။ ဒါနဲ့ သင်္ဘောဝမ်း
ကွဲထွက်ပြီး သဘောင်္ထဲကို ရေတွေ ဒလဟော ၀င်လာပါတယ်။ မကြာခင် သင်္ဘော
တစီးလုံးနစ်မြုတ်ဖို. ပဲကျန်ပါတော.တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပရောဖက်ဆာကြီးဟာ
သူ.အခန်းထဲမှာ သူကရိယာတွေ ထိန်းပြီး မလူပ်မရှက်နဲ့ ချွေးပြန်ပြီး
ကြောက်လို. နေပါတော့ တယ်။ အဲဒီအချိန်ခါမှာ ကပ္ပတိန်က ပရော်ဖက်ဆာကြီး ရှိရာ အမြန် ပြေးလာပြီး ၊ဗျို.၊
ဗျို. ပရောဖက်ဆာ ကြီး။ မကြာခင် ကျုပ်တို. သင်္ဘောမြုတ် တော့မယ်ဗျ၊ “Have you
studied Swimology? ” ဆိုပြီး ထိပ်ထိပ်ပြာပြာ မေးလိုက်ပါတယ်။ပရော်ဖက်ဆာကြီး
ကလည်း ၊ Swimology ဆိုတာ ဘာလဲကွ “ငါပညာတွေ ဒီလောက်သင် လာတာ မင်းပြောတဲ့
Swimology ဆိုတာ ကြားလည်း မကြားဖူးပါဘူး၊ သင်လည်း မသင်ခဲ့ ဖူးပါဘူး၊
ရှိလည်း မရှိပါဘူးကွာ၊ ” လို. ပြောပါတယ်။ ထိုအခါမှာတော့ သင်္ဘောမောင်းတဲ့
ကပ္ပတိန်က swimology ဆိုတာ ရေးကူးတဲ့ အတတ်ပညာ ကိုပြောတာပါဗျာ။ ပရော်ဖက်ဆာ
ကြီးက အော်လော်ဂျီပေါင်း များစွာ ကျုပ်ကို မေးနေတော့ ၊ ကျုပ်ကလည်း
အော်လော်ဂျီ ထည့်ပြီး မေးလိုက်မိတာပါ။ ပရော်ဖက်ဆာကြီး swimology မတတ်
ဘူးဆိုရင်တော့ ပရောဖက်ဆာကြီး ရဲ့ ၊ အသက်လုံးလုံး ကြီး သေပြီသာ မှတ်ပေတော့
လို.ပြောလိုက် ပါတော့တယ်။ ထိုအခါ ပရော်ဖက်ဆာကြီးက ၊ အေးကွာ
ငါအော်လော်ဂျီတွေ ဒီဂရီတွေ ဘွဲ.တွေ အများကြီး ရထားပေမဲ့ ရေကူးတဲ့ အတတ်ပညာ
swimology ကို တော့ မတတ် မြောက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ငါအသက်ဆုံးရူံး ရတော့မယ်
ဆိုပြီး သဘောင်္နဲ့အတူ ပရောဖက်ဆာ ကြီးလည်း နစ်မြုတ် သွားပါတော့တယ်။ ဘာလော်ဂျီမှ
မတတ်ပဲနဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ မွေးလာတဲ့ သင်္ဘော ကပ္ပတိန်က ရေကူး အတတ် ပညာနဲ့ အေးအေး
ဆေးဆေး ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ကူးပြီးတော့ ကမ်းပေါ်တက် သွားပါတော့တယ်။ ဒီပုံပြင်လေး
ထဲက သဘောင်္မောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန်ဟာ ဘာပညာမှ မတတ်ပေမဲ့ သူ.ကိုသူ ယုံကြည်မူ.
အပြည့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ယုံကြည်ချက်နဲ့ သင်္ဘောကြီး မြုတ်သွားပေမဲ့ ဟိုဘက်ကမ်း
ရောက်အောင် ကူးခတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ ပင်လယ် ကြီးလိုပါပဲ၊
ကျယ်လည်း ကျယ်တယ် ၊ နက်လည်း နက်တယ်။ ဟိုဘက်ကမ်းလည်း မြင်ဖို.ခက်ပါတယ် ၊
ဒီဘက်ကမ်း မှာကျတော့ လည်း ရပ်တည်ဖို. ခက်ပါတယ်။ လိူင်းတံပိုးတွေ၊
မုန်တိုင်း တွေ၊ထန်တဲ့ ပင်လယ် ကြီးကို ကျော်ဖြတ်ဖို. တော်တော် ခက်တယ်၊
သို. ပေမဲ့ ယုံကြည်ချက် ရှိတဲ့သူ အတွက်ကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ လိူင်းတွေထူထပ်
ထူထပ်၊ ကူးခတ် နိုင်ပါတယ်။ ထို.အတူပါပဲ ။ ကမ္ဘာကြီးရွာ ကြီးထဲမှာ
သုံးနေတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို တို.ရွာက လူတွေ နားမလည် ပေမဲ့ အားငယ်နေစရာ
မလိုပါဘူး ၊ ပညာခေတ် ဆိုပြီး ဘွဲ.တွေ၊ ဒီဂရီတွေ အများကြီး ရထားတဲ့
သူတွေကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း တို.ဒါတွေ အများကြီး သင်ရဦးမှာ
ပါလားဆိုပြီးလည်း အားငယ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ပညာဆိုတာ စာပေသင်ကြားရုံ၊ စာအုပ်
စာတမ်းဖတ်ရုံ နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ စာသိ သာမက မိမိ ဘoမှာ လက်တွေ
ကျင့်သုံးပြီး ဘ၀ကျောင်းမှရတဲ့ ပညာတွေကို လည်း သင်ယူကြရမှာပါ။ ဘွဲ.ရ
ပညာတတ် ဆိုပြီး ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေကို လက်တွေ. ဘ၀မှာ အသုံးချ မူ.
အရှိဘူးဆိုရင် ပုံပြင်ထဲက ပရော်ဖက်ဆာ ကြီးလိုပဲ ဘ၀တစ်ခုလုံး သေ
သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် နည်းပညာတွေ ရဲ့ အစွှမ်း သတ္တိ အောက်မှာ
Globalization ခေတ်ကြီး ထဲမှာ Global Village ကသုံးနူန်းကြတဲ့ ဝေါဟာရတွေ
နားလည်ချင် လည်း နားလည် ကြပါလိမ့်မယ်။ ဝေါဟာရအတိုင်း နားလည်သည် ဖြစ်စေ၊
နားမလည် သည်ဖြစ်စေ ၊ ဒီဝေါဟာရ စကားလုံးတွေကို သိချင်လည်း သိ ၊ မသိချင်လည်း
နေပါ။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့၊ သွားလိုတဲ့ မိမိရဲ့ ပန်းတိုင်ကို ကိုယ့် အစွမ်း
အစနဲ့ ၊ ကိုယ့် ယုံကြည်ချက်နဲ့ ၊ ကိုယ့်အကျင့်ကိုယ် ကျင့်ပြီး၊
ကိုယ့်လမ်းကိုယ် အရောက် သွားနိုင်ဖို.သာ အဓိကပါပဲ ။ အသိဥာဏ် ပညာနဲ့ လက်တွေ.ကျင့်သုံးမူ. ကို အခြေခံပြီး မိမိကိုယ်မိမိ
ယုံကြချက်ဖြင့် ဘ၀ ပင်လယ်ကြီး ကို ကူးဖြတ် ကျော်လွှားနိုင် ကြပါစေ ။မေတ္တာဖြင့်။မေစိုး (ရွှေမန္တလေး) ဤဆောင်းပါးသည် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ထုတ်ဝေသော အပြင်စီး - မဂ္ဂဇင်း ဇန္န၀ါရီလထုတ်တွင် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ http://www.myshwemandalay.com/2012/03/blog-post_11.html မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်မလိုပဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင် photoshop ပြင်လိုသူများအတွက် ဒီနေရာမှာကလစ်ပေးပါ
နွေရာသီ ကလေးများအတွက် ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်း တစ်ခုမှာ ဆရာက ပစ္စည်း အခေါ်အဝေါ် အကြောင်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို Hardware နဲ့ software နှစ်ပိုင်းခွဲထားတဲ့အကြောင်းကို တင်နေချိန်မှာပါ...
ဆရာမ ။ ။ ကဲ ကလေးတို့ရေ mouse နှစ်မျိုးရှိတယ်. နာမည်လေးတွေ ပြောပြပါလို့ ပြောချိန်မှာ အသံတစ်သံက အားလုံးကို ကျော်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကလေးသံ။ ။ အော်တီကယ် မောက်စ် နဲ့ မော်တော်ပီကယ် မောက်စ်ပါတဲ့
(ကလေး အဖေ က ယဉ်ထိန်းဌာနက ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဆိုတာ နောက်မှ သိရတာပါ။ သြော် မက်ကယ်နီကယ် မောက်စ်မှ မော်တော်ပီကယ် မောက်စ်သို့ အခြေအနေအရ ပြောင်းရွေ့သွားခြင်းပါလား)
မူလတန်းအရွယ် ကလေးများကို ကွန်ပျူတာသင်သော အခန်းလေးထဲဝယ်........
ဆရာ။ ။ ကဲ ကလေးတို့ရေ ကွန်ပျူတာကို အပိုင်းဘယ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးထားသလဲကွယ်.
ကျောင်းသား။ ။ နှစ်ပိုင်းပါဆရာ
ဆရာ ။ ။ တော်လိုက်တာကွယ်. ကဲသား ဘယ်လိုလဲကွယ်ပြောပါအုန်း..
ကျောင်းသား ။ ။ အတန်းရှေ့သို့ရဲဝံ့စွာ ထွက်လာပြီး လက်ကလေးဖြင့် မော်နီတာ ဖန်သားပြင်အား အလယ်မှ လက်ဖြင့် ပိုင်းဒီ ဟန် ပြုလုပ်ပြီး " ဒီလို ပိုင်းတာပါတဲ့" ကဲ ဆရာခမျာ ငိုရမှာလားရယ် ရမှာလား မသိတော့ပါ လိုချင်သည်က hardware & software အဖြေပါ.ရလာသည်က........
အတော်လေးကောင်းတဲ့ Photoshop ပါ ( နမူနာကြည့်ကြည့်..ကြိုက်စေရမယ်)
Photoshop ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်နည်းတွေအများကြီးပါသေးတယ်..လိုအပ်သလိုသုံးကြည့်
စာတမ်းကို နောက်ခံမပျက်စေပဲ ဖျက်ထားတဲ့ပုံပါ..အတော်လေး သဘောကျတယ်
ဒီဆော့ဝဲလေးက အရင်တင်ပီးသားထင်တယ် အသုံးလိုနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိလို့ 
ထပ်ပြီးတင်လိုက်ပါတယ် Photoshopပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာအနုစိတ်jပန်ပြင်ဖို့ အတွက်
အသုံးပြုလို့ ကောင်းတယ် ပုံတွေမှာပါလာတဲ့ စာတွေကိုလည်း နောက်ခံမပျက်စေပဲ
ဖျက်ပေးပါတယ် နမူနာပုံလေးတင်လိုက်ပါတယ်..အသုံးလိုရင်ယူ...Full Version ..။
ဒီမှာ Download ယူပါ http://www.mediafire.com/?Photoinstrument5.5 full
ငါတို့ရဲ့ . . . . . . အိမ်
မိမိမှာ Gmail Account တစ်ခုရှိပြီး၊ မြန်မာလိုစာစီနိုင်ရန်အတွက် ZawGyi Font ကိုလည်း Install ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင် Blog တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီး နိုင်ကြပါပြီ။ Blog တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များကို ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဖော်ပြသွားပါမယ်။ Step 1) Sign in to blogger Step 2) Display name (or) Author name Step 3) Name your blog Step 4) Choose your template Step 5) Publish your first pest မှတ်ချက်။ ။ ထိုအဆင့်များပြီးဆုံးလျှင် ဘလော့တစ်ခုကို ရရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ Step1) Sign to Blogger မိမိ Gmail Account တစ်ခုရှိပြီဆိုရင် Blog တစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက် www.blogger.com မှာ Sign in တစ်ခုလုပ်ရပါမယ်။ သွားပုံက Browser program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IE (0r) Mozilla ၏ Address bar တွင် www.blogger.com ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး Enter key ကိုနှိပ်ပါ။ Blogger home page ၏ အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင် “ sign in area ” ၏ အပေါ်ရှိ Language တွင် English ဖြစ်ရပါမယ်။ Email Address (ဥပမာ- username@gmail.com) ၊ Password နေရာတွင် ၄င်း Email password တို့ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် Keyboard မှ Enter ကိုနှိပ်ပါ (သို့) Sign in တွင် Click နှိပ်ပါ။ Step 2) Display Name (0r) Author Name မိမိထည့်သွင်းသည့် Email နှင့် Password တို့ မှန်ကန်ပါက Signup လုပ်ဖို့ရန် တောင်းခံပါလိမ့်မည်။ Display name နေရာတွင် မိမိနှစ်သက်ရာ အမည်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ အမည်ကို Blog မှာတင်သမျှ Post တို့၏ အောက်ခြေတွင် ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောက Post မှာ ရေးသူ (သို့)ကလောင်အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သည့်အတွက် အမည်ဝှက်နှင့် ရေးချင်ရင် မိမိအမည်ရင်း အစားအခြားအမည်ဝှက် တစ်ခုထည့်သွင်းရပါမည်။ Display name ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် ရှေ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက် Blogger မှ ထုတ်ပြန်သော Term of Service တွေကို လက်ခံသဘောတူရပါမယ်။ Trem of service ဘေးရှိ Check box တွင် အမှန်ဖြစ်ပေါ်အောင် Click တချက်နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Button တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ မှတ်ချက်။ ။ ယခုထည့်ပေးခဲ့သည့် Display name အတိုင်းပင် အမြဲတမ်းသုံးရတော့မည်ဟု မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ Blog တစ်ခု အစအဆုံးဖန်တီးပြီးသွားသည့် နောက်ပိုင်း Display name ကို အချိန်မရွေး မိမိနှစ်သက်သလို ပြောင်းလဲရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ Step3) Name your Blog ဒီအဆင့်မှာ Blog title နှင့် URL လို့ခေါ်တဲ့ မိမိ Blog လိပ်စာတို့ကို သတ်မှတ်ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ စာအုပ်အမည်တို့နှင့် သဘောတရားတူပါတယ်။ Blog title ကို မြင်ကြရုံဖြင့် အထဲမှာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ရေးသားထားမလဲဆိုတာကို မှန်းမိနိုငစေပါက ပိုကောင်းပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ အမည်ကို Blog Title တွင် ရိုက်ထည့်ရာတွင် Title ကို မြန်မာလို ပေးချင်ပါကလည်း ပေးနိုင်သည်။ URL (or) Blog Address Bolg လိပ်စာကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ မိမိ Blog ကို ဖတ်သူတို့အနေနှင့် မှတ်မိလည်းလွယ်ရမယ်။ ရိုက်လို့လည်း လွယ်ရမယ့် အမည်မျိုးဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် မိမိနာမည် (သို့) Blog title ကိုပင် ပြန်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အရေးကြီးတာက လိပ်စာကို အင်္ဂလိပ်လိုသာပေးရပါမည်။ အထူးသတိပြုပါ။ မိမိရွေးချယ်ထည့်သွင်းမည့် စကားလုံးတို့၏ နောက်တွင် blogspot.com ပါရှိမည်ဖြစ်ရာ မိမိ Bolg လိပ်စာအပြည့်အစုံ http://www.name.blogspot.com ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ Blog Address တစ်ခု သည် အခြားမည်သည့် Address တို့နှင့်မှ မတူညီနိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာ ဖြစ်ကြရပါမယ်။ သည့်အတွက် မိမိအလိုရှိရာအမည်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ရရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာ စစ်ဆေးကြရပါမယ်။ Check Availability တွင် Click နှိပ်ပြီးစစ်ဆေးပါ။ အခြားသူတဦး လိပ်စာနှင့် တူနေပါက ပြောင်းခိုင်းပါလိမ့်မည်။ လိပ်စာတူရှိနေရင် အနီရောင် စာလုံးတွေနှင့် not available ဆိုပြီးမြင်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင်ယူသုံးလို့ရနိုင်တဲ့ အမည်တွေကို အကြံပြုဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအမည်တွေထဲက တစ်ခုခုကို Click နှိပ်ပြီး ရွေးချယ် နိုင်တယ်။ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် စိတ်တိုင်းကျအမည်တစ်ခု ရိုက်ထည့်ပြီး Check Availibility ဖြင့် ထပ်မံစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်။ လိပ်စာမတူ၊ လိပ်စာတူမရှိပါက “available” ဆိုတာကိုမြင်ကြရမယ်။ ရှေ့ဆက်သွားရန်အတွက် continue တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ မှတ်ချက်။ ။ Title ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Address ပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ပိုင်းမှာ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Address ပြောင်းမယ်ဆိုရင် သတိပြုရမှာက မိမိ Blog ၀င်ရောက်ဖတ်ရူ့သူတွေ မျက်ခြေပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Step 4) Choose your Template Template ဆိုတာမိမိ Blog ရဲ့ design ၊ တနည်းဆိုရရင် Webpage ရဲ့ degsin ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်နောက်ခံ၊ အစိမ်းရောင်နောက်ခံ၊ အမည်းရောင်နောက်ခံ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ Blogger မှာ အဆင်သင့် ယူသုံးနိုင်တဲ့ Template များစွာရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Blog ကို အစိမ်းရောင်လေးနောက်ခံနှင့် လိုချင်ရင် Scrodl bar ကို အပေါ်အောက်ဆွဲပြီး အစိမ်းရောင်ပါတာလေးရွေးပေါ့။ Scroll bar ကို အပေါ်အောက်ဆွဲရွေးပြီး ပိုမိုတိကျစွာ သိချင်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာ Template ၏ review တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Blog တစ်ခုကို အစအဆုံးရေးပြီးသွားတဲ့အခါ မိမိ Blog အား Webpage တစ်ခုအနေနှင့် ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာကို သီးခြား Window တစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ အခြားသော Blog Setting တွေကဲ့သို့ပင် Template ကို အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေရာမှာ ရွေးခဲ့တဲ့ Template အတိုင်းပဲံအမြဲဖြစ်နေတော့မယ်လို့ စိုးရိမ်စိတ်မထားပါနှင့်။ စဖြစ်သွားအောင် လက်သင့်ရာရွေးပြီး နောက်မှ ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာ Template ရှိ Radio button ကို Click နှိပ်ပြီး Select လုပ်ပါ။ Template ရွေးပြီးပြီဆိုရင် Continue button တွင် Select လုပ်ပါ။ Template ရွေးပြီးပြီဆိုရင် Continue button တွင် Click နှိပ်၍ ရှေ့ဆက်သွားပါ။ Step 5) Publish Your First Post Template ကိုရွေးခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် Blog တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ Create လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသော Page ကို မြင်ကြရပါမယ်။ ထို Page ပေါ်မှ Your blog has been create! စာတန်းအောက်ခြေမှ Start blogging တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ဒီအဆင့်သို့ရောက်ပြီဆိုရင် သိရမှာက blog တစ်ခုလိုတော့ ဖန်တီးပြီးပြီ။ သို့သော် ဘာမှမရှိသေးတဲ့ အခွံချည်းသက်သက်လို့သိထားရပါမယ်။ ဥပမာ-ဆိုရရင် မြေနေရာ (Address) ရလို့ နှစ်သက်ရာပုံစံ (Template) နှင့် အိမ်လည်းတည်ဆောက်ပြီးပြီ ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ရအုံးမယ်။ ဒါတွေဖြည့်ပြီးမှသာ နေလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်တစ်လုံးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိမယ်ပေါ့။ ထိုသဘောတရားအတိုင်းပါဘဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရယ်၊ စာတွေရယ် ရေးမယ်။ တင်ချင်တဲ့ ပုံတွေတင်ပြီး ဝေေ၀ဆာဆာဖြစ်အောင် ဖန်တီးကြရပါအုံမယ်။ အဲ့ဒီလိုစာတွေရေးတင်ခြင်း၊ ပုံတွေလှမ်းတင်ခြင်းကို Post တင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ စပြီး Post လုပ်ရန်အတွက် Start Blogging တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ စာတွေရေးသားနိုင်မယ့် ပုံတွေထည့်နိုင်တဲ့ Window တစ်ခုကျလာပါမယ်။ ၄င်းကို Post Editor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ Post Title ဒီနေရာမှာက Post title ၊ ဟိုရှေ့မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့ Title က Blog title ။ မရောထွေးမိပါစေနှင့်။ Blog title ဆိုတာက စာအုပ်အမည်လို တစ်ခုပဲရှိမယ်။ Post title ဆိုတာက ကိုယ်တင်ရင် တင်သလောက်များမယ်။ ဥပမာ ဆိုရရင် Blog တစ်ခုထဲမှာ post ဆယ်ခုတင်ရင် Post title ဆယ်ခုရှိမယ်ပေါ့။ Text Area ရေးလိုသမျှ Text area ထဲမှာရေးသားကြပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ရေးသားသမျှတို့သည် မိမိတင်မည့် Post ၏ စာကိုယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ရေးလိုသမျှရေးပြီး၍ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင် Publish post တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ရေးခဲ့သော Post ကို အင်တာနက်ပေါ်မှတဆင့် အများသူငါ ကြည့်၍ရအောင် အောင်မြင်စွာ လွှင့်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသော Page ကိုမြင်ကြရပါမည်။ မိမိရဲ့ တင်လိုက်တဲ့ Blog ကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ချင်ရင် View Blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Post တစ်ခုတည်းသာရှိတဲ့ မိမိရဲ့ Blog အသစ်စက်စက်လေးကို တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ Sign Out Post အသစ်တင်ချင်ရာတွေကိုလည်း တင်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ပြင်စရာရှိတာတွေကို ပြင်ခဲ့ပြီး၍ လတ်တလော ရှေ့ဆက် အသုံးမရှိသေးသည့်အတွက် ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်း Sign out လုပ်ပြီးမှ ထွက်ရပါမယ်။ အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ရှိသော Sign out တွင် Click နှိပ်ပြီးထွက်ပါ။ မှုလအစဖြစ်တဲ့ www.blogger.com သို့ ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ Blogger Interface အားလေ့လာခြင်း Blog လေးတစ်ခု ဖန်တီးလိုက်တယ်။ Post လေးတွေရေးတင်တယ်။ လိုအပ်ရင် ရေးထားတဲ့ Post တွေကို ပြန်ပြင်မယ်။ Post အသစ်တွေထပ်တင်ကြတယ်။ ဒါတွေက Blog နှင့်ဆိုင်တဲ့ သာမာန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေပါ။ သာမန်ထက်ပိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး မိမိ Blog ကို ထူးထူးခြားခြားလေး ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ကြချင်တယ်။ Blogger interface ကို နားလည်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Posting Tab Posting tab အောက်မှာ Create၊ Edit post အစရှိသဖြင့် အခွဲတွေပါတယ်။ Post အသစ်များတင်ခြင်း၊ တင်ပြီးသား Post တွေကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းများကို ဒီ Posting tab အောက်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်။ Setting Tab Setting Tab အောက်မှာ Basic၊ Publishing၊ Formatting အစရှိသဖြင့် အခွဲတွေရှိပါတယ်။ Blog title ပြောင်းခြင်း၊ Comment ပိတ်ခြင်း၊ Email ဖြင့် post လှမ်းတင်နိုင်အောင် စီစဉ်ခြင်းများ အပါအ၀င် စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အတော်များများကို ဒီ Setting tab အောက်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ Layout Tab Layout tab အောက်မှာ Page Elements၊ Pick new template အစရှိသဖြင့် အခွဲတွေပါတယ်။ Template အသစ်ပြောင်းခြင်း၊ မိမိ Blog ရဲ့ အဆင်အပြင်ကို ပိုမိုကြည့်ကောင်းအောင် Page elements များ ထပ်တိုးဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းခြင်းများကို ဒီ Layout tab အောက်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ The Dashboard မိမိရဲ့ Blog မှာ Post အသစ်တွေထပ်တင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တင်ပြီးသား Post တွေထဲက အချို့ပြန်ပြင်ချင်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖျက်ထုတ်ခြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြဲတမ်း Blogger homepage ဖြစ်တဲ့ (www.blogger.com) ထံသို့ ပြန်လာရပါမယ်။ ရောက်ပြီဆိုရင် Blog ဖန်တီးခဲ့စဉ်က အသုံးပြုခဲ့သော Email address နှင့် Password တို့ကိုပင် သုံးပြီး ပြန်လည် Sign in လုပ်ရပါမယ်။ Sign in ၀င်ရောက်မှု အောင်မြင်ပြီဆိုရင် Blogger Dashboard ဆိုတာကို မြင်ကြရပါမယ်။ Blogger Dashboard သည် Post အသစ်ထပ်တင်ခြင်း၊ ရှိပြီးသား Post ကို Edit လုပ်ခြင်းတို့အပါအ၀င် Blog အားစီမံခန့်ခွဲမှု အလုပ်များကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်များစွာ အထောက်အကူပေးပါတယ်။ New post နှင့် Manage post တို့သည် Dashboard ထဲမှ အသုံးပြုရမှုအများဆုံး Icon ၂ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ Blog တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ဘူးသော Gmail Account နှင့် ပြန်ဝင်တိုင်းမှာ Blogger Dashboard ကိုမြင်ကြရပါမည်။ Post အသစ်များထပ်တင်ခြင်း ရှေ့ဘက်မှာဖော်ပြခဲ့သလို User name နှင့် Password တို့ကို ထည့်ပြီး Blogger မှာ Sign in လုပ်ပြီးတာနှင့် မိမိ Blog ကို အဓိက Control လုပ်ရာ Dashboard ဆိုတာကို တွေ့ကြရပါမယ်။ Post အသစ်တစ်ခု ထပ်တင်ရန်အတွက် အစိမ်းရောင်အပေါင်းသင်္ကေတလေးနှင့် New Post တွင့် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ Post တွေရေးသားနိုင်မည့် (Posting create page) ပေါ်လာပါမည်။ ရှေ့မှာတုန်းက Post အသစ်တစ်ခုစရေးစဉ်က အတိုင်းပင် Title နေရာတွင် စာခေါင်းစဉ် Post title နှင့် Text area ထဲတွင် ရေးလိုသောစသားများကို ရိုက်ထည့်ပါ။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင် Publish post တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Post အသစ်ကို အောင်မြင်စွာ ထပ်တင်ပြိး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိ Bolg ကို ဖွင့်ကြည့်လျှင် အရင်တင်ခဲ့သည့် Post များနှင့်အတူ Post အသစ်များကိုပါ ယှဉ်တွဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တင်ပြီးသား Post များကို ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခြင်း မိမိတင်ထားခဲ့တဲ့ Post တွေကို ပြင်ချင်ရင် အချန်မရွေးပြန်လည် Edit လုပ်လို့ရပါတယ်။ သဘောက မကြိုက်တဲ့စာသားတွေကို ဖြုတ်ပစ်မယ်။ ထပ်ထည့်ဖို့လိုအပ်ရင် ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့။ Dashboard ပေါ်မှ Manage Post ပေါ်တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ မိမိ၏ Blog မှာတင်ထားသမျှသော Post တို့၏ Title များအားတန်းစီမြင်ရပါမယ်။ ပြန်လည် Edit လုပ်လိုသော Post Title နှင့် သက်ဆိုင်သော Edit ပေါ်တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ (Posting /Edit posts) Page သို့ရောက်သွားပြီး Post တွင်ပါ စာသားများကို မြင်ကြရပါမယ်။ ၄င်း Post title တစ်ခုစီဘေးမှ Edit တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ Title ပဲဖြစ်စေ၊ Text area ထဲမှ စာသားများကိုဖြစ်စေ လိုသလို ပြောင်းလဲဖြည့်စွက်နိုင်ကြပါတယ်။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုလျှင် Publish post တွင် Click ပြန်နှိပ်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့် ။ ဒီနေရာမှာ တင်ပြီးသား Post တွေထဲက အချို့ကို ပြင်ဆင် Edit လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပဲ။ လုံးဝကို ဖျက်ထုတ်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ တန်းစီထားသော Post title များထဲမှ ဖျက်ထုတ်လိုသော Title နှင့် သက်ဆိုင်သော Delete ပေါ်တွင်Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အမှန်တကယ် ဖျက်ထုတ်လိုခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို Confrom လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Delete It တွင် Click နှိပ်ဖျက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ၄င်း Post ကို အပြီးအပိုင် ဖြတ်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Add formatting Text area ထဲမှာ ရှိနေသည့် စာသားတွေရဲ့ စာလုံးပုံစံ Font ပြောင်းခြင်း၊ Font အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း၊ Blod လုပ်ခြင်း၊ အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Compose တွင် Formatting tools တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ စာလုံးပုံစံ Font ပြောင်းခြင်း ရိုက်ထည့်ထားသည့် စာသားတွေထဲက အချို့ကို Font ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းချင်တဲ့ စာသားတွေကို အပြောရောင် High light ဖြစ်အောင် Mouse ဖြင့် Drag ဆွဲပြီး Select လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Font family ထဲက down arrow တွင် Click နှိပ်ပြီး Font တစ်မျိုးကို ရွေးချယ် Click နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိ Select လုပ်ခဲ့သော စာသားတွေရဲက စာလုံးပုံစံ Font ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ စာလုံးအရွယ်အစားပြောင်းခြင်း Text area ထဲမှ စာလုံး အရွယ်အစားပြောင်းလိုသော စာသားများကို Mouse ဖြင့် High light ဖြစ်အောင် Select လုပ်ပါ။ Font size icon ပေါ်တွင် Click နှိပ်ပြီး ကျလာမည့် List ထဲမှ နှစ်သက်ရာ အရွယ်အစား တခုခုပေါ်တွင် Click နှိပ်ရွေးချယ်ပါ။ Bold, Italic, Text color အချို့စာလုံးတွေကို Bold ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Italic ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Text color အရောင်ပြောင်းချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပထမဦးဆုံး Drag ဆွဲပြီး လုပ်ရပါမယ်။ Bold လုပ်ချင်ရင် “B” တွင် Click နှိပ်ပါ။ စာလုံးအထူများဖြင့် မြင်ရပါမယ်။ Italic လုပ်ချင်ရင် “I” တွင် Click နှိပ်ပါ။ စာလုံးစောင်းများ မြင်ရပါမယ်။ Text Color အရောင်ပြောင်းချင်ရင် Text box တွင် Click နှိပ်ပြီး နှစ်သက်ရာအရောင်ကို ရွေးချယ် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ စာလုံးအရောင်ပြောင်းသွားပါမယ်။ Post တွင်းသို့ပုံများထည့်တင်ခြင်း ( Add Image) တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း စာသားတွေချည်းပဲ တင်ထားတာထက်စာရင် အကြောင်းအရာနှင့် လိုက်ဖက်တဲ့ ပုံလေးတွေပါဆွဲပြီး တင်သည့် Post တွေဟာ လူအများအား ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်စေပါတယ်။ အချို့က သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေအတွင်း စုဆောင်းထားသည့် အမှတ်တရာ ပုံတွေကို မိမိနှင့် စိတ်ချင်းနီးသူတို့ ခံစားနိုင်အောင် မျှဝေချင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်တွေနှင့် ပုံတွေကို မှတ်တမ်းတင်သဘောမျိုး တင်ထားပေးတတ်သည်။ Add to Picture ပုံတွေကို ရှေ့မှာတုန်းကလို Post ထဲမှာ မဟုတ်ပဲ Page Element (widget) တွေအဖြစ်မိမိ Blog မှာထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ Picture နေရာရှိ Add to Blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Configure Image ပွင့်လာပါမည်။ Title နှင့် Caption တို့တွင် နှစ်သက်သလို စာသားများ ဖြည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် Browse တွင် နှိပ်ပြီး တင်လိုသော ပုံကို ရွေးချယ်ညွှန်ပြပေးလိုက်ပါ။ Image နေရာတွင် ပုံပေါ်လာပြီဆိုရင် Save Change တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ မိမိမှာ Gmail Account တစ်ခုရှိပြီး၊ မြန်မာလိုစာစီနိုင်ရန်အတွက် ZawGyi Font ကိုလည်း Install ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင် Blog တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီး နိုင်ကြပါပြီ။ Blog တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များကို ဖော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဖော်ပြသွားပါမယ်။ Third-Party Page Elements (widgets) Poll တို့၊ Slide Show တို့အစရှီတဲ့ Blogger ထံမှ အဆင်သင့်ယူနိုင်တဲ့ Page element တွေအပြင်အခြား Website များထံမှ Page element တွေကို ယူထားပြီးတော့လည်း မိမိ Blog page ထဲမှာ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီလို Blogger ထံမှ မဟုတ်ပဲ အခြား Website တစ်ခုခုထံမှ သီးခြားယူသုံးတဲ့ Element တွေကို Third- Party element တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ အခြားသူတို့ရဲ့ Blog စာမျက်နှာတွေမှာလည်း တွေ့ဖူးကောင်းတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ နာရီလေးတွေ၊ ပြက္ခဒိန်လေးတွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ဥပမာ အနေနှင့် Clock widget လေး တစ်ခုလောက်ထည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ Third-party element တွေထည့်မယ်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့် အပိုင်းက နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ ပထမအပိုင်းက မိမိ Blog ထဲထည့်ထားလိုတဲ့ အခြား Website မှ Element နှင့် ဆိုင်သော HTML tag တွေကို Copy မှ ကူးယူရမယ်။ ပြီးမှ မိမိ Blog ထဲမှာ Paste လုပ်ယူရမယ်။ နာရီပုံ HTML widget ရယူရန်အတွက် www.clocklink.com သို့သွားပါ။ ထို့နောက် Go to Gallery တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ နာရီပုံသဏ္ဍန်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံတို့ရှီရာ Clock Gallery ထဲသို့ ရောက်သွားပါမယ်။ မှတ်ချက်။ ။ Clock link မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်မှ အခြေားသော Clock widget site တွေများစွာရှိပါသေးတယ်။ Google သို့သွားရောက်ပြီး Clock widget လို့ ထည်သွင်းရှာဖွေကြည့်ပါ။ ရလာတဲ့ အထဲကမှ ကိုယ်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီနိုင်မည့် Link များသို့ သွားရောက်ပြီး စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ကြပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ နာရီပုံ တခုကိုရွေးပါ။ ရပြီဆိုရင် ထိုနာရီနှင့် သက်ဆိုင်ရာ View Html Tag ပေါ်တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါက နာရီပုံပါ Pop-up windows တစ်ခုပွင့်လာပါမည်။ Time Zone နေရာတွင် မိမိဒေသစံတော်ချိန်ကို ရွေးပေးပါ။ ဥပမာ- မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုလျှင် (GMT +6:30) ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါက နာရီအရွယ်အစား အကြီးအသေးကို Size နေရာတွင် ရွေးချယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ (130*130) နာရီနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုလျှင် အပေါ်ကွက်လပ်ထဲရှိ Code များအားလုံးကို Copy ကူးယူရပါမယ်။ စာသားများကို Select မှတ်ပြီးညာဘက် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ကျလာမည့် Menu ထဲရှိ Copy တွင် နှိပ်ပြီး ကူးယယူလိုက် ရပါမယ်။ Post ထဲမှာ ပုံတွေထည့်ရန်အတွက်က ဘာမှမခက်ခဲပါဘူး။ Blogger မှာပုံတွေကို အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ Add Image လို့ခေါ်တဲ့ Tools တစ်ခုပါ၇ှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ဘယ်ပုံကို တင်မှာလဲ။ မိမိကွန်ပျူတာထဲက ဘယ်နေရာ (ဥပမာ-Desktop ပေါ်မှာလား၊ My Document ထဲမှာလား) ဘယ်မှာရှိနေသလဲဆိုတာလောက်ကိုတော့ သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ 1. Compose bar ပေါ်ရှိ Formatting toolbar ထဲမှ Add image တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Upload window တစ်ခုပွင့်လာပါမည်။ 2. ပထမဦးစွာတင်ချင်သည့် ပုံကို ရွေးချယ်ညွှန်ပြပေးရပါမယ်။ Browse တွင် Click နှိပ်ပါက “File upload” box ပျောက်သွားပြီး မှုလ Upload window ရှိ Browse နေရာတွင် မိမိရွေးချယ်ခဲ့သောပုံ File အမည်ကို မြင်ကြရပါမယ်။ ယခုအဆင့်ထိသည် ပုံကို အမှန်တကယ် Upload မလုပ်ရသေးပါ။ ဘယ်ပုံတင်မလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်ညွှန်ပြပြီးရုံရှိသေးတယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ မှတ်ချက်။ ။ တပြိုင်နက် ပုံငါးပုံအထိတင်နိုင်ပါတယ်။ အခြားပုံတွေထပ်တင်လိုပါက Add another image တွင် Click နှိပ်ပြီးထပ်မံရွေးချယ်နိုင်ကြပါတယ်။ 3. နောက်တစ်ခါ ရွေးချယ်စရာက Layout နှင့် Image Size ဖြစ်ပါတယ်။ တင်ချင်တဲ့ပုံကို Right၊ Center၊ Left တို့ထဲက ဘယ်နေရာမှာ ထားချင်သလဲ။ တခုခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ပုံက သက်ဆိုင်ရာ Radio Button ပေါ်တွင် Click နှိပ်ရပါမယ်။ ထို့အတူ ပုံအရွယ်အစားကိုလည်း Small၊ Medium၊ Large တို့ထဲကမှ တခုခုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် စတင် Upload လုပ်လို့ရပါပြီ။ Upload လုပ်ရန်အတွက် Blogger မှ ထုတ်ပြန်သော စည်းကမ်းချက်တွေပါတဲ့ ” Term of Services” ကိုလက်ခံသဘောတူရပါမယ်။ သည်အတွက် I Accept ဘေးရှိ Check Box ပေါ်တွင် အမှန်ခြစ်ပေါ်အောင် Click နှိပ်ရပါမယ်။ ပြီးလျှင် Upload တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ မိမိရွေးချယ်ခဲ့သော ပုံကိုစတင် Upload လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပုံ၏ အရွယ်အစားနှင့် Internet Connection ပေါ်မှုတည်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ Upload ပြီးပြီဆိုရင် Done ဆိုတဲ့စာလုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Done တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Upload Window ပျောက်သွားပြီး Text area ထဲတွင် မိမိတင်ခဲ့သောပုံ မြင်ကြပါပါမယ်။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင် Publish post တွင် Click နှိပ်၍ Post ကိုတင်နိုင်ကြပါပြီ။ မှတ်ချက်။ ။ Publish လုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင် မိမိရဲ့ Blog ကိုဖွင့်ပြိး ပုံရဲ့အနေအထား ကောင်းရဲ့လား၊ ပုံအရွယ်အစား အလားတော်ဖြစ်ရဲ့လား အစရှိသဖြင့် ပြန်လည်စစ်ဆေး ကြည့်ရူသင့်ပါတယ်။ စိတ်တိုင်းမကျဘူးဆိုရင် ရှေ့မှာပြောပြသလို Post ထဲမှာရှိတဲ့ စာသားတွေကို ပြန်လည် Edit လုပ်သလိုမျိုး ပုံတွေကိုလည်းပြန်လည် လုပ်နိုင်ကြပါသေးတယ်။ အခြား Blog များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း (Add Link) Link ဆိုတာက Webpage တခုကနေအခြား Webpage တခုခုဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Link ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားသွားနိုင်တဲ့နည်းကတော့ Mouse Pointer ဖြင့်လိုက်ထောက်ကြည့်ပါ။ ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် မြှားပုံကနေ၊ လက်ပုံပြောင်းတာမှန်သမျှ သည် Link များပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ပုံပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ Click နှိပ်ရင် လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ Page ကနေ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အခြား Page တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ Blog ထဲမှာ မိမိရေးချင်ရာအပြင်အခြား Blog များ(သို့) Website များဆီသို့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Link တွေလည်း ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ Link တွေကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့် ထည့်ကြတယ်။ အချို့က မိမိတင်သည့် Post နှင့် အကြောင်းအရာချင်းဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ Post တွင်းပါ အကြောင်းအရာတွေကို ပိုမို အားကောင်းအောင် အထောက်အကူပေးနိုင်သော အခြားသူတဦးဦး၏ Blog (သို့) Webpage တစ်ခုခုကို Link လုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့ကျပြန်တော့လည်း မိတ်ဆွေအချင်းချင်း (သို့) ဦးတည်ချက်ခြင်းတူတဲ့ Blog တွေအချင်းချင်း အပြန်အလှန် Link များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မိမိတို့အုပ်စုထဲက Blog တစ်ခုခုပေါက်သွားရင် တနည်းဆိုရရင် လူကြိုက်များလာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ Blog ထဲမှာ ညွှန်ပြချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အခြား Blog တွေပါ လူကြည့်ပိုများလာမယ်ပေါ့။ 1. ပထမဦးစွာ မိမိ Link လုပ်လိုသော Blog (သို့) Webpage ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပွင့်လာပြီဆိုရင် ၄င်း Page ၏ URL လို့ခေါ်တဲ့ လိပ်စာကို Copy လုပ်လိုက်ပါ။ 2. (Posting/Compose) Text area ထဲမှ Link လုပ်လိုသော စာသားများကို Mouse ဖြင့် Drag ဆွဲပြီး Select လုပ်ပါ။ စာသားများအပြာရောင် High light ဖြစ်လာပါမည်။ Select လုပ်ပြီးပြီဆို၇င် Tool bar ထဲမှ Add link ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ 3. ကျလာမည့် Box ထဲရှိ URL နေရာတွင် Paste လုပ်လိုက်ပါ။ ရှေ့မိမိ Copy ယူထားခဲ့သည့် URL ပေါ်လာပါမည်။ Copy/Paste မလုပ်လိုလျှင် ဒီနေရာမှာ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ Typing အမှားမဖြစ်အောင်တော့ အထူးဂရုပြုရပါလိမ့်မယ်။ 4. Ok button တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါက Select မှတ်ထားခဲ့သော စာသားများကို အပြာရောင် အောက်ခံလိုင်းဖြင့် မြင်ရပါမယ်။ သဘောက Link ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကို ပြပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် Publish post တွင် Click နှိပ်ပြီး မိမိရဲ့ Post ကိုတင်လိုက်ပါ။ 5. Blog ထဲတွင် Post တက်လာတဲ့အခါ Link ပေါ်တွင် Click နှိပ်ပါက ချိတ်ဆက်ထားခဲ့သော Blog (သို့) Webpage ကိုမြင်ကြရပါမယ်။ 6. ထို Link ပေါ်တွင် Click နှိပ်ပါက ချိတ်ဆက်ထားသော name.blogspot.com ကိုမြင်ရပါမယ်။ Comments ပုံမှတ်အားဖြင့်ဆိုရင် Post တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာ Comment ဆိုတဲ့ Link တစ်ခုကို တွေ့ကြရပါမယ်။ Blog တို့တွင် Comment တို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အလွန်အရေးပါလှပါတယ်။ ရေးသူနှင့် ဖတ်သူတို့ အပြန်အလှန်ထိတွေ့စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောက Post တွင်ပါ အကြောင်း အရာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဖတ်ရူသူတို့မှ ဝေဖန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြည့်စွက်အကြံပေးခြင်းများကို Comment မှတဆင့်ဝင် ရောက်ရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ Writing Comment ပုံမှတ်အားဖြင့်ဆိုရင် Blog post တိုင်းမှာ Comment ၀င်ရေးနိုင်ကြပါတယ်။ အချို့တွေက Comment ရေးခွင့်ပိတ်ထားသည့် Post တို့မှာတော့ Comment ရေးလို့မရပါ။ အများစုမှာတော့ Google account တစ်ခုရှိရင် ၀င်ရေးနိုင်ကြပါတယ်။ ရေးပုံရေးနည်းကတော့ ရိုးရှင်း လွယ်ကူလှပါတယ်။ ရေးလိုတဲ့ Post အောက်မှာရှိသော Comment ပေါ်တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဒီ Post နှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ မိမိရှေ့ကရေးသားထားသော Comment များကို တန်းစီပြီးတွေ့ရပါမယ်။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုဝေဖန်ချက်ပြုထားသလဲဆိုတာကို ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း Comment ၀င်ရေးချင်ရင် Leave Your Comment နေရာတွင် ရေးလိုသော စာသားများကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ရေးပြီးပြီဆိုရင် Publish လုပ်ရပါမယ်။ User name နဲ့ Password တို့ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် Publish Your Comment တွင့် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Comment အရေအတွက် တခုထပ်တိုးသွားပြီး Comment List ထဲရောက်သွားပါမည်။ Stop Comments မိမိတင်တဲ့ Post တွေမှာ Comment ရေးတာမကြိုက်ရင် Comment Link မပါအောင်ဖြုတ်ထားလို့ရပါ တယ်။ အရေးကြီးတာက Post တစ်ခုချင်းစီကို ရွေးပြီးခွင့်ပြုမယ်၊ မပြုဘူး။ လုပ်ချင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တင်သမျှ Post အားလုံးကို ရေးခွင့် မပြုချင်တာလားဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားရမယ်။ ဒီအခြေအနေ ၂မျိုး ပေါ်မှုတည်ပြီး ….. 1. Dashboard ပေါ်မှ Manage Settings တွင် Click နှိပ်ပါ။ Setting အောက်မှ Basic ထဲသို့ ရောက်သွားပါမယ်။ ဒီနေရာကို (Setting / Basic) Page လို့ ခေါ်ပါမယ်။ 2. Setting အောက်မှ Comments တွင် ထပ်မံ Click နှိပ်ပါက (Setting/Comments) Page ထဲသို့ ရောက်သွားပါမယ်။ Who can Comment? နေရာတွင် ဘယ်သူတွေကိုပဲ ရေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာ မျိုးကန့်သတ်နိုင်ကြပါတယ်။ Anyone ကို ရွေးမယ်ဆိုရင် Google account (Gmail) ရှိသူတွေသာ ရေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Comment Default for Posts နေရာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် New posts have Comments ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောက တင်သမျှ Post တိုင်းမှာ Comment ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Comment မပါအောင် တခါတည်း ပိတ်ထားလိုလျှင် New Posts Do Not Have Comments ကိုရွေးရပါမယ်။ စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပါက Page ၏ အောက်ခြေတွင်ရှိသော “Save Settings” တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Template Selection Dashboard ပေါ်မှ Layout ပေါ်တွင် Click နှိပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် Template Selection အောက်ကို ရောက်ပါတယ်။ ဒီနေရာက မိမိ Blog ရဲ့ ဒီဇိုင်း အဆင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လိုသလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ကြပါတယ်။ PickaNew Template Blogger မှာ အဆင်သင့်ယူသုံးနိုင်တဲ့ Template ပေါင်းများစွာရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမကြိုက်ရင် အခြားတစ်ခု အချိန်မရွေးပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ အခြား Template တစ်ခုသို့ ပြောင်းချင်ရင် Layout အောက်မှ Pick New Template တွင် Click နှိပ်ပါ။ အဆင်သင့် ယူသုံးနိုင်တဲ့ Template များကို မြင်ရပါမယ်။ ဒီနေရာကို (Layout/Pick New Template) လို့ ဆိုရပါမယ်။ အကြိုက်ဆုံး တစ်ခုကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Save Template တွင် Click နှိပ်ပါ။ မိမိ Blog ရဲ့ Template ကို ပြောင်းပေးသွားပါမည်။ View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ Page Elements (Widgets) Page Elements တွေဆိုတာက Webpage တို့ရဲ့ အဆင်တန်ဆာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ကို ညီညွှတ်မျှတအောင် ပေါင်းဆပ်ဆင်ယင်နိုင်မည်ဆိုပါက Page ရဲ့ အဆင့်အတန်းအရည်အသွေးကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေပါလိမ့်မယ်။ မိမိတို့ Blog ရဲ့ဒီဇိုင်း (Template) ကိုလည်း Page element တို့ ထပ်မံပေါင်း စပ်ထည့်သွင်းပြီး စိတ်ကြိုက်တန်ဆာဆင်ထားလို့ ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Blog တစ်ခုဖန်တီးပြီးတိုင်း Profile တို့ Active တို့ဆိုတဲ့ Page element တွေကတော့ အလိုအလျှောက်ပါရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအပြင်၊ နာရီတို့၊ ပြက္ခဒိန်တို့။ မိမိမိတ်ဆွေတို့၏ Blog လိပ်စာများ အစရှိသည်တို့ကို Page element တွေအဖြစ် လိုသလို ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါသေးတယ်။ Layout အောက်မှ Page elements တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာ ကို (Layout/Page element) လို့ဆိုပါမယ်။ ညာဘက်ခြမ်းကို သတိထားပြီးကြည့်ပါ။ Contributors နှင့် Blog Archive ဆိုပြီး Page elements နှစ်ခုကို တွေ့ရပါမယ်။ ထိုနှစ်ခုက Blog စတင် Create လုပ်စဉ်ကတည်းကိုက အလိုလျောက်ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ Page Elements သစ်တွေထပ်ထည့်ချင်ရင် “ Addapage element” တွင် နှိပ်ပြိး ထပ်ထည့်နိုင်ကြပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ မိမိရွေးခဲ့တဲ့ Template ပေါ်မှုတည်ပြီး Page element ထည့်နိုင်မယ့်နေရာတွေ အနည်းငယ် ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ AddaDescription Blog Title အောက်တွင် Description ထည့်လိုက ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ Description ဆိုတာက မိမိရဲ့ Blog သည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး အစရှီသည်တို့ထဲက ဘယ်ကဏ္ဍပေါ်မှာ အခြေခံတည်ဆောက်ထားသလဲဆိုတာကို ဖတ်ရူ့သူများအား အလွယ်တကူသိစေနိုင်မည့် အချက်အလက် စကားလုံးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Dashboard ပေါ်မှ Manage Setting တွင်နှိပ်ပါ။ Setting အောက်မှ Basic ထဲသို့ ရောက်သွားပါမယ်။ ဒီနေရာကို (Setting / Basic) Page လို့ ခေါ်ပါမယ်။ Blog title ကိုပြင်လိုက ဒီနေရာတွင် ပြင်နိုင်ပါတယ်။ Description နေရာတွင် မိမိရေးလိုတဲ့ ကဏ္ဍကို ကိုယ်စားပြုမည့် စကားလုံးများကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် Page ၏ အောက်ခြေတွင်ရှိသော Save Setting ကို Click နှိပ်ပါ။ “setting were saved successfully” ဆိုတာ ပေါ်လာပါမည်။ သဘောက မိမိဖြည့်စွက်ခဲ့သည့် အတိုင်း ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပြိးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဆိုရင် Description ထည့်ပြီးသွားပြီ။ မိမိ Blog ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် Blog title အောက်မှာက Description အဖြစ်ထည့်ခဲ့သော စာသားများကို မြင်ကြရပါမယ်။ Addateam Member Blog တစ်ခုတည်းကို လူအများစုပေါင်းရေးလို့ရတယ်။ သဘောက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပဲ စိတ်ချရတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုပါ မိမိ Blog မှာဝင်ရောက်ရေးသား Post တင်နိုင်အောင် လုပ်ထားလို့၇ပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ တစ်ယောက်မအားတဲ့အခါ တစ်ယောက်ဝင် ရေးကြခြင်းဖြင့် မိမိ Blog သည် အမြဲတမ်း Update ဖြစ်နေမယ်ပေါ့။ အဲ့လိုဝင်ရေးနိုင်အောင် သူတို့သည် မိမိ Blog ရဲ့ Member ဖြစ်ကြရပါမယ်။ Member ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့၇န် အပိုင်း(၂)ပိုင်း ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Blog ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ မိမိကနေသူတို့ထံသို့ Email ဖြင့် Invite လုပ်ရပါမယ်။ ဒါက ကိုယ့်ဘက်က လုပ်ရမယ့်အပိုင်း။ ဟိုတစ်ဖက်က ၀င်ရောက်ရေးသားဖို့ရန် ဖိတ်ကြားခံရသူတွေ အနေနှင့်တော့ Invite လုပ်သည့် Email ရောက်လာပြီဆိုရင် ဖွင့်ဖတ်ပြီး Activate လုပ်ပေးရပါမယ်။ Activate လုပ်ပြီးတာနှင့် Member ဖြစ်သွားပြီး ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်ကြပါပြီရှင်။ Invite လုပ်ခြင်း Member ဖြစ်အောင် Invite လုပ်ရန်အတွက် Setting အောက်မှ Permission တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာကို (Setting Permission) Page လို့ ဆိုရပါမယ်။ Permission အောက်ရှိBlog Author နေရာတွင် ဒီ Blog မှာ ၀င်ရေးသူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲဆိုတာကို ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုချိန်မှာတော့ Member မရှိသေးသည့် အတွက် မိမိ တဦးတည်း၏ အမည်ကိုသာ မြင်တွေ့ကြရပါဦးမယ်။ Invite လုပ်ရန်အတွက် Add Author တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Member အဖြစ် ဖိတ်ကြား လိုသော သူ၏ Email လိပ်စာကို Invite more people နေရာတွင် ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ Invite တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါက Blogger သည် ထည့်သွင်းပေးခဲ့သော Email လိပ်စာထံသို့ Activation Link တစ်ခုပါတဲ့ Email တစ်စောင်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အတူ Permission အောက်တွင် Invite ခုပ်လိုက်သော Email လိပ်စာပေါ်လာပါမည်။ အကယ်၍ အကြောင်းတခုခုကြောင့် Invite မလုပ်လိုတော့ပါက Remove တွင် Click နှိပ်ပြီး ဖျက်ထုတ်နိုင်ကြပါတယ်။ Invite လုပ်ခြင်းကို လက်ခံခြင်း (Joinateam Blog) ယခုဆက်လက်ပြီး Member အဖြစ်ဖိတ်ကြားခံရသူတွေဘက်က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြရမယ့် Activation အပိုင်းကို ဖော်ပြသွားပါမယ်။ Blog မှာ ၀င်ရောက်ရေးသားရန် ဖိတ်ကြားသော Email ထဲသို့ ၀င်လိုက်ပါက Invite လုပ်သော Email message ကိုတွေ့ရပါမယ်။ ၄င်း Message ကို ဖွင့်လိုက်ပါက အပြာရောင်စာသားများဖြင့် Activation Link တစ်ုခကိုတွေ့ရပါမယ်။ Member ဖြစ်အောင် Activate လုပ်ဖုိ့ရန် Link ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် www.blogspot.com သို့ရောက်ရှိသွားပြီး Invite လုပ်ခြင်းကို လက်ခံသဘောတူကြောင်း အတည်ပြုပေးရပါမယ်။ Username နေရာတွင် Email Address နှင့် Password နေရာတွင် ၄င်း Email Address နှင့် သက်ဆိုင်သော Password တို့ကို ထည့်ပေးရပါမယ်။ Username နှင့် Password တို့ကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပြိးပါက Accept Invitation တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Team Member ဖြစ်သွားပြီး ၄င်း Blog တွင် ၀င်ရောက် ရေးသော Post တင်နိုင် ကြပါပြီ။ Manage team Member ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံ၍ Activate လုပ်ပြီး သူတို့သည် မိမိ Blog ရဲ့ Member များဖြစ်လာကြပါပြီ။ အဲဒီ Member ဖြစ်လာသူတွေသည် ပုံမှန Default အားဖြင့် မိမိ၏ Blog မှာ Post တွေကိုသာ ရေးတင်နိုင်ခွင့်ရှိ ကြပါတယ်။ အခြားဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိကြပါဘူး။ Blog ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ မိမိကသာလျှင် Blog အမည်ပြောင်းခြင်း၊ Template ပြောင်းခြင်း၊ Post တွေဖျက်ထုတ်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက အခြေခံသဘောကို ပြော တာပါ။ အကယ်၍ လိုအပ်ပါက Member ထဲမှ ယုံကြည်ရသူတစ်ဦးဦးကို မိမိရဲကလုပ်ပိုင်ခွင့်များအတိုင်း ပေးအပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။ Setting အောက်မှ Permission တွင် Click နှိပ်ပြီး (Setting / Permission) သို့သွားလိုက်ကြရအောင်။ Permission အောက်တွင် ဒီ Blog မှာ ၀င်ရောက်ရေးသားနိုင်သူ Member ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲဆိုတာကို တန်းစီဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ Member တွေထဲကမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်တိုးမြှင့်ပေးလိုသော Member အမည်ဘေးမှ Grant Admin တွင် Click နှိပ်ပါ။ Admin အဆင့်ပေးပို့ရန် အတည်ပြုချက်တောင်းခံသော Box တစ်ခုမြင်ရပါမယ်။ “Grant Admin Privilege” တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ထိုသူသည် Post ရေးသားနိုင်ရုံသက်သက် မဟုတ်တော့ဘဲ Blog အားမိမိကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Add Poll Poll ဆိုတာက အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပေါ်မှာ လူအများ၏ သဘောထား အမြင်တွေကို သိရှိနိုင်အောင် ကောက်ယူသော စစ်တမ်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရရင် စစ်တမ်း ထုတ်ချင်တဲ့ မေးခွန်း တစ်ခု ဖန်တီးမယ်။ ပြီးရင် သဘောထားအမြင်တွေကို ခြုံငုံမိနိုင်တဲ့ အဖြေလေးတွေပေးထားလိုက်မယ်။ လာရောက်ဖတ်ရူသူတွေက သူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့ အဖြေကို ရွေးချယ်ဖြေကြားသွားခြင်းဖြင့် အများဆန္ဒ ဘယ်လိုရှိနိုင်မယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ်ပေါ့။ Element သစ်တခုကို ထည့်သွင်းချင်တိုင်းမှာ “Addapage element” တွင် Click နှိပ်ကြရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် မိမိ Blog မှာ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်မည့် Element များပါဝင်တဲ့ Pop-up window တစ်ခုပွင့်လာပါ မည်။ အဲဒီအထဲကမှ ဆန္ဒရှိရာ Element ၏ Add to blog တွင် Click နှိပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်ကြပါတယ်။ Pop-up window ထဲက “ Poll ” Section နေရာရှိ Add to blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ “Create Poll” Window ကို မြင်ကြရပါမယ်။ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီးပြီဆိုရင် Save တွင် Click နှိပ်ရပါမယ်။ Pop-up window ပျောက်သွားပြီး မှုလ (Template/Page element) တွင် Element သစ်တစ်ခု တိုးလာတာကို တွေ့ကြရပါမယ်။ View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်ပါက မိမိထည့်သွင်းခဲ့သော Poll ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ကြရပါမယ်။ Add Link List မိမိ Blog ကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရူသူတို့အားကောင်းနှိုးရာရာ Website လေးတွေ၊ ဦးတည်ချက်တူလို့ ညွှန်ပြချင်တဲ့ Blog တွေကို Link List အဖြစ်တန်းစီပြီး ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ Element သစ်တခုကို ထည့်သွင်းချင်တိုင်းမှာ “Addapage element” တွင် Click နှိပ်ကြရမယ်။ Pop-up window ထဲက Link List နေရာရှိ Add to blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ “Configure Link List” Window ကိုမြင်ကြရမယ်။ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ပြီးလျှင် Add Link တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Link တစ်ခုစာရင်းဝင်သွားပါပြီ။ URL နှင့် Name တို့တွင် ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် Link များထပ်ထည့်ပါ။ ထည့်သွင်းလိုတဲ့ Link အရေအတွက် ပြည့်ပြီဆိုရင် Save Changes တွင် Click နှိပ်ပါ။ Pop-up window ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Pop-up window ပျောက်သွားပြီးမှုလ (Template Page element) တွင် Element အသစ်တစ်ခုထပ်တိုးလာပါမည်။ View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်ပါက မိမိထည့်သွင်းခဲ့သော Link List ကို တွေ့ကြရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် HTML Code တွေကို Copy ကူးပြိးသွားပြီ။ နောက်တဆင့် ဆက်ရန်အတွက် www.blogger.com ထဲ Login ၀င်ရောက်ပြီး Page Element သစ်တခုထည့်ရန် ပြင်ဆင်ကြရပါမယ်။ HTML Java Script နေရာရှိ Add to blog တွင် Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Configure window ပွင့်လာပါမယ်။ Title တွင် နာရီနှင့် ပတ်သတ်၍ ပေးလိုသော အမည်ရိုက်ထည့်ပါ။ (ဥပမာ-မြန်မာစံတော်ချိန်) Content နေရာထဲတွင် ညာဘက် Click နှိပ်ပြီး Paste လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် www.clocllink.com ကနေကူးလာတဲ့ HTML Code များ ဒီ Content ထဲမှာ ပေါ်လာပါမည်။ Save Changes တွင် Click နှိပ်ပါက စတင် Save လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးပြီဆိုရင် Page Element Added ဆိုပြီးပေါ်လာပါမည်။ View Blog တွင် Click နှိပ်ကြည့်ပါက Blog စာမျက်နှာတွင် နာရီကို မြင်ကြရပါမယ်။ Email ဖြင့် Post အသစ်များတင်ခြင်း Blogger ကို ရွေးချယ်မှုအတွက် ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ထူးခြားသည့် အပိုင်းကတော့ Email ဖြင့် Post လှမ်းတင်နိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် Email ပို့ရိုးပို့စဉ်အတိုင်း ပို့ရုံဖြင့် Blog ထဲမှာ Post တစ်ခုတင်ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုရရင် Email ပို့တဲ့အခါရေးသည့် Subject သည် Post Title ဖြစ်လာမည်။ Email Message တွင်ပါ စာသားတို့သည် Post တွင်းပါစာသားများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဓိကကျတာက To နေရာမှာ ထည့်သွင်းပေးပို့ရမယ့် Email Address ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း Email လိပ်စာကိုရရှိဖို့ရန် Blogger မှာ Login ၀င်ရောက်ပြိး ဖန်တီး ယူရမယ်။ ပြီးရင် လျှို့ဝှက်ထားရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘယ်သူပဲပို့ပို့ အဲဒီလျှို့ဝှက်လိပ်စာဆီပို့လိုက်ပြီဆိုတာနှင့် Blog ထဲမှ Post တစ်ခုအနေနှင့် တက်လာတော့မှာ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုလိပ်စာကို လုံးဝ လျှို့ဝှက်ထားရပါမယ်။ ပထမ အဆင့်အနေနှင့် လျှို့ဝှက်လိပ်စာ (Secret Email Address) ရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ကြည့်ကြရအောင်။ ပြီးမှ Gmail ဖွင့်ပြီး ၄င်းလျှို့ဝှက် လိပ်စာထံသို့ Email တစ်စောင်ရေးပို့ပြီး Post လှမ်းတင်ပုံကို ဆက်လက် ပြောပြသွားပါမယ်။ 1. www.blogger.com ထဲသို့ Login ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင် Setting tab အောက်တွင်ရှိသော Email ထဲသို့သွားလိုက်ရအောင်။ ဒီနေရာကို (Setting/Email) Page လို့ခေါ်လိုက်ကျရအောင်။ 2. Blog Send Address နေရာတွင် မိမိရဲ့ Email လိပ်စာကိုထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ။ Mail-to-Blog Address နေ၇ာတွင် လျှို့ဝှက်လိပ်စာအတွက် မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ စာလုံးများကို ထည့်ပေးရပါမယ်။ လျှို့ဝှက် Email လိပ်စာသည် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ------@blogger.com လိပ်စာမှ -----ပြထားသော နေရာများသည် ကိုယ်ထည့်ရမည့် အပိုင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ကဆိုခဲ့သလိုပင် လျှို့ဝှက်လိပ်စာဖြစ်ရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် အခြားသူများခန့် မှန်းလို့ မရနိုင်စေမည့် စာလုံးများသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၄-လုံးဖြည့်သွင်း ကြရပါမယ်။ ဥပမာ-ပုံအရ လျှို့ဝှက်စာသည် username@blogger.com ဖြစ်လာပါမည်။ 3. Save Setting တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Secretemail Adddress တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ဒါဆိုရင် ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Email မှတဆင့် Post လှမ်းရေးဖို့ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ။ Email ဖွင့်ပြီး Post တစ်ခုလောက်ရေးတင်ပုံကို ကြည့်လိုက်ရအောင်…….. 1. To နေရာတွင် လျှို့ဝှက်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။ 2. Subject နေရာတွင် ရေးခဲ့သော စာသားများသည် Post title ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ 3. Email Message ၏ Body ထဲတွင် ရေးသားသော စာများသည် Post တွင်ပါ စာသားများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရေးလိုသမျှ ရေးပြီးပြီဆိုရင် နောက်မှ စာနောက်ဆုံးမှာ #end ဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာအထိပဲဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ Email Program တွေမှာ ကိုယ်ရေးတာအပြင် “No Virus Found” ဆိုတဲ့ စာသားတွေ၊ ကြော်ငြာတွေအလိုလိုပါသွား တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေမပါအောင် #end ကိုထည့်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စ်ိတ်တိုင်းကျပြီဆိုလျှင် Send တွင် Click နှိပ်ပြီးပို့လိုက်ပါ။ ခဏအကြာ Blog ထဲမှာ Post သစ်တခုတိုးလာပါလိမ့်မယ်။ Address ဘားမှာ လိုဂိုလေးတွေထည့်မယ် ကျွန်တော် တို့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် ဘရောက်ဇာရဲ့ ထိပ်မှာရှိတဲ့ လိပ်စာ ဘားမှာ ဘလော်ဂါကွန် ရဲ့လိုဂိုလေး ကိုဒီလိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။ ကဲ ဒီနေရာလေး ကို ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုလေး အဖြစ်ပြောင်းချင်သူ များအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ လေး ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်သိပြီးသူများ သိပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပေမယ့် မသိသေးသူများ လုပ်ရမှာ ခက်ခဲနေသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဝေမျှလိုက်တာပါ...။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ် ကဲစလိုက်ကြရအောင်... ပထမဦးဆုံး ဘလော့ဂ် ရဲ့ Layout ကိုဝင်လိုက်ပါ.. ပြီးရင်တော့ Edit HTML ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါ... အဲဒီမှာ ကုဒ်တွေထဲက
ဒီကုဒ်မှာထည့်ထားတဲ့ လိုဂိုလေး ရဲ့လိပ်စာ အတိုင်းထည့်လိုက် ရင်တော့ ကျွန်တော့် လိုဂိုပုံစံလေး ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံအလံလေး ဟာ လိပ်စာ ဘားမှာ တလူလူ လွင့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. အပြည့်အစုံကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် http://slip-meepyatite.blogspot.com/2008/12/blog.html သို့....
eepyatite@gmail.com မှ ပေးပို့သည်။
photoshop နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာချင်သူများ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအသုံးပြုနည်းပို့လေးတွေတင်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။ဒီလိုတင်ခြင်းမှာ ကျွန်တော်နှင့်အတူ ဒီဇိုင်းပညာရပ်ကိုလေ့လာနေတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့ ပညာသင်ဘက်ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မအားလုံးကို လွယ်ကူစွာလေ့လာဖို့အတွက်အထောက်အပံ့လေး တစ်ခုဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်မျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိသိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်။ ဒီနည်းပညာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လိုပဲမျှဝေချင်တဲ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ ရှိပါက yemin.moonstar@gmail.com ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
SIGN PETITION "နောင်ထွက်မည့် မိုက်ခရိုဆော့ဝင်းဒိုး OS များတွင် မြန်မာဘာသာ အသုံးပြုရရန် ထည့်သွင်းပေးပါ" ဟု ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ မြန်မာ ပြောဆို / ရေးသားသူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှ တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆိုပါကြောင်း ဒီနေရာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။
ယနေ. ကမ္ဘာ ကြီး ကိုတော့ အများ တကာတွေ ပြောနေကြတဲ့ ကမ...
Admin(s) ---- yemin.moonstar@gmail.com my photo
ကမ္ဘာ့ရွာ ကြီးရဲ့ အကြောင်းကို သေသေချာချာ မသိပေမဲ့ ကမ္ဘာရွာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ကြားတော့ ကိုယ့်အတွက် အစိမ်း သက်သက် ဖြစ်မနေပဲ နားဝင်ချို သလို ...
အတော်လေးကောင်းတဲ့ Photoshop ပါ ( နမူနာကြည့်ကြည့်..ကြိုက်စေရမယ်) Photoshop ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်နည်းတွေအများကြီးပါသေးတယ်..လိုအပ်သလိုသ...
မိမိမှာ Gmail Account တစ်ခုရှိပြီး၊ မြန်မာလိုစာစီနိုင်ရန်အတွက် ZawGyi Font ကိုလည်း Install ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင် Blog တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီး နိုင်...
အခု ကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့ Adobe Photoshop CS3 ကို Serial Number ကို မသုံးပဲနဲ့ Crack ချိုးတဲ့ နည်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံ ( ၁ ) ။ ဒါက...
ayan pal chit nay p - အင်တာနက် ချစ်သူ.flv for everyone For lover... Download this and other original video files with Mu...
နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ website များ
http://www.nyinaymin.org/ http://kp3family.blogspot.com/ http://www.mgkyawswarnyein.net/ http://itmen.myanmarbloggers.org/ http://starl...
ပိုတိုရှော့ ဆော့ဝဲလ်မှာ အခြေခံ အရေးကြီးဆုံးတွေက (၁) Layer လို့ခေါ်တဲ့ အလွှာနိုင်ရမယ် (လေယာ)အလွှာနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ လေယာတွေရဲ့ သဘောသဘာဝတေ...
Freez FLV to AVI MPEG WMV မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်း
သတင်းများ ဖတ်ရှုရန်အတွက်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ ကဗျာလေးများ ဖတ်ရှုရန်အတွက်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
စာအုပ်များဖတ်ရှုလိုလျှင် ရယူရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ အသုံးဝင်သောသိထားသင့် သောဆိုဒ်လေးများ သိရှိစေရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
Virus နဲ့ ပါတ်သက်သမျှ ဆော့ ဝဲလ်လေးများဒေါင်းရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
ဒေါင်းမာန်ဟုန် နေ့ သစ်
ဟံသာဝတီ ရဲရင့်ငယ်( ကနေဒါ)
ဝယ်-ရောင်းနဲ့ အလုပ်ရဖို့ ကြော်ငြာ အိမ်ခြံမြေ ငွေဈေးနှုန်း
အလုပ်လိုချင် ဒီကိုလာပါ ပြည်တွင်းစာမျက်နှာများ
အီကိုဗီးရှင်းဂျာနယ် အားကစားစာမျက်နှာ များ
ပရီးမီယားပွဲများ ပြန်ကြည့်ရန် ဥရောပ ကန်ပြီး ပွဲများကြည့်ရန်
Power by yemin.moonstar@gmail.com. Awesome Inc. template. Powered by Blogger.